» ONLF oo beenisay in ay Hishiis la gashay Al-Shabaab
ONLF oo beenisay in ay Hishiis la gashay Al-Shabaab
Dec 6, 2012 - 1 Jawaab	Sarkaal sare oo katirsan jabhada ONLF ayaa beeniyay warar sheegaya in uu jiro heshiis dhexmaray jabhada ONLF iyo ururka Al-shabaab, oo dhowaan ay daabeceen qaar kamid ah Website-yada Soomaalida.
Sarkaalkan oo lasoo xiriiray Muqdishonews.com ayaa xaqiijiyay in uusan jirin wax heshiis ah oo dhexmaray ONLF iyo Al-Shabaab isaga oo intaas kudaray in arintaasi tahay wax lalayaabo.
Masuulkan oo kacudur daartay in magaciisa la shaaciyo ayaa yiri hadii aan Al-Shabaab heshiis lagalayno taasi waxa ay dhici lahayd wakhtigii ay awoodda lahaayeen islamarkaana ay gacanta kuhayeen inta badan koonfurta wadanka Soomaliya.
Jabhada ONLF ayaa warbixinada iyo qoraalada ay daabaceen qaarkamida warbaahinta somaliya ku macaneysay in ay kadanbeeyan siyaasiyiin Soomaliyed inkasta oo ayna jirin cid ama shaqsi gaara oo ay Magac-dhabeen.
Sarkaalkan lasoo xidhiidhay Muqdishonews waxa uu camabaareeyay warbixinada caynakana isaga oo saxaafada Soomaaliyana ka dalbaday inay u fiirsadaan warbixinada xaasaasiga ah ee noocaan oo kale ah, waxaana uu isaga oo hadalkiisa sii wata yidhi “Waxaan u aragnaa inay arintani gaf nagu tahay laguna soo duulay qadiyada aan unasab sheegano, anagu waxaan dagaal kula jirnaa Ethiopia oo ah cadawga somaliyeed”.
Gabagabadii ayuu sarkaal kani warbaahinta afka Soomaaliga ku hadasha kacodsaday in aysan garab siinin dawlada Ethiopia oo ah mid u taagan burburinta danaha umada soomaaliyeed meelwalba oo ay joogaan sida uu yiri.
« Warbixinta Ka HoreysayKulan deg deg ah oo laga yeeshay xaalada degmada Kaxda	Warbixinta Xigto »Wasiirka Warfaafinta oo Turkiga kasoo laabtay arimo badana ka hadlay.	One Response to ONLF oo beenisay in ay Hishiis la gashay Al-Shabaab
mahamed dhagaxbuur says:	January 3, 2013 at 7:39 am	warniyow wax ethiopia layidhaahdo dagaalkulama jirtida iskadaa beenta